शरीरमा अक्सिजन लेभल कसरी बढाउने ? यस्ता छन उपाय। - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
शरीरमा अक्सिजन लेभल कसरी बढाउने ? यस्ता छन उपाय।
प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, मुटु तथा मिर्गौला रोग विशेषज्ञ बिपी प्रतिष्ठान धरान पछिल्लो समय जटिल खालका कोभिड संक्रमितहरू बढ्दै गएका छन् । काठमाडौंका केही अस्पतालले त बेड तथा अक्सिजन अभाव भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेर उपचार नै गर्न नसक्ने जानकारी दिन थालेका छन् । काठमाडौं मात्रै होइन, देशभरकै अस्पतालका आइसियू र अक्सिजन बेड अभाव हुन थालेको छ । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सय बेडको कोभिड अस्पताल मंगलबारदेखि भरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम भएका बिरामीले घरमै बसेर पनि उपचार गर्न सक्छन् । यस्ता विधि अपनाए तत्काल आइसियु बेड चाहिने जटिल अवस्थालाई केही हदसम्म टार्न सकिन्छ ।
कोभिड सङ्क्रमण भइसकेको छ र घरमै बसेर सामाना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ । शरीरलाई आवश्यक पानी, झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त खानुपर्छ । ज्वरो आएको छ भने कम गर्न पारासिटामोल औषधि खानुपर्छ । झाडापखाला लागेमा जीवनजल खानुपर्छ । धेरै जीउ दुखेमा कोडोमोल भन्ने औषधि सेवन गर्न सकिन्छ । नयाँ पत्रीका बाट साभार गरिएको ।